March 2015 | Pyithu Hluttaw - ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာလီကွမ်ယူ ကွယ်လွန်ခြင်း အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် အမှတ် (၂၃၆) ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစင်ကာပူသံရုံး၌ စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာလီကွမ်ယူ ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်းစာအုပ်၌ ဝမ်းနည်းကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်သည် Landesa (Rural Development Institute) မှ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ Prof: Roy Prosterman နှင့်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက် ညနေ (၁၆း၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-2) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးခင်မောင်ညိုနှင့် ဒေါက်တာ စိုးမိုးအောင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြေအသုံးပြုရေးမူဝါဒများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မြေယာ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းသည် စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ International Political Studies (IPS) မှ ပထမနှစ်သင်တန်းသားအဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ (၁၃း၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (၁) ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းနှင့်အတူ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးရင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးနှင့် အခွန်ကောက်ဆိုင်ရာ စိစစ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာသည် The World Bank မှ စီးပွားရေးပညာရှင်အကြီးအကဲနှင့် အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr.Kaushik Basu ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (၁) ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးနိုင်သည် ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှ Ms. Bui Thi Lanအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ်(၁) ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန် ဦးဆောင်သည့် ကနေဒါနိုင်ငံပါလီမန်ဆိုင်ရာစင်တာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် IDEA အဖွဲ့တို့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန် Hon. Bryon Wilfert ဦးဆောင်သည့် ကနေဒါနိုင်ငံပါလီမန်ဆိုင်ရာစင်တာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် IDEA အဖွဲ့တို့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက် ညနေ(၄)နာရီ (၄၅)မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-1)၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ စိစစ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာ IDEA မှ Honorable Bryon Wilfert ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ စိစစ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာသည် IDEA မှ Honorable Bryon Wilfert ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက် ညနေ(၄)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ်(၁)ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်နှင့် ဗီယက်နမ် အဖနိုင်ငံတော်တပ်ဦးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်နှင့် ဗီယက်နမ် အဖနိုင်ငံတော်တပ်ဦးဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr Nguyen Thien Nhanဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက် ညနေ(၄)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ စိစစ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့မှ Mr. Dejan Ostojic ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ စိစစ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသာသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့မှ Mr. Dejan Ostojic ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက် ညနေ (၄) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံရေးရာဆောင် အမှတ် (၁) ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် USAID ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (USAID’s Promoting the Rules of Law Project) မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mitch Gruner အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်သည် USAID ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (USAID’s Promoting the Rules of Law Project) မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mitch Gruner အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက် ညနေ (၄) နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံရေးရာဆောင်အမှတ် (I-2) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။